Mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
TOROLALANA FITARIHANA AHAFANTARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA
Zavatra tsy misaraka amin’ny fiainana kristiana ny fahafantarana sy fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Eo amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika ve isika mahatsiaro manontany an’i Jesosy?
Andriamanitra no mampahafantatra antsika izany sitrapony izany, ary ny anjarantsika dia mandray sy mitanila ka mifandray aminy. Ampahafantariny antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina sy ny Teniny izany sitrapony izany, ao amin’i Jesosy.
Tian’i Jesosy isika ahafantatra ny sitrapony, araka izay lazain’ny Asa. 22:14 « Ary hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitrapony sy hahita ny Iray Marina ary hihaino ny teny aloaky ny vavany ».
Izany indrindra ary no antony anolorana ireto andinin-tSoratra Masina ireto. Tsy hoe feno na ampy, fa nosoratana indrindra hanampy antsika hiroso ho amin’ny lalina kokoa. Tsy nasiana valinteny hafa afa-tsy ny Soratra Masina Irery Ihany, ka anjarantsika no mitsintona ny votoatiny ao.
Eto am-pamaranana dia soa fianatra ny nataon’i Davida ary azontsika tahafina indrindra, araka ny Salamo 143:10:
« Ampianaro hanao ny sitraponao aho; Fa Ianao no Andriamanitro; Aoka ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin’izay tany marina. »
Fitarihana ihany no atao eto …
1. INONA NO SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Ary ankehitriny, dia maneke ny teniko, fa hanoro hevitra anao aho » Eksodosy 18:19a
« Ary sitraky ny Tompo ny nangatahan’i Solomona izany zavatra izany (saina malady, fo mihaino, manavaka ny soa sy ny ratsy > fahendrena > fahaizana hitsara) » 1 Mpanjaka 3:10
« Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ ny farany » Jeremia 29:11
« Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin’ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty hianareo, ry taranak’Isiraely? » Ezekiela 33:11
« Kanefa katsaho ny fanjakany [Na: (ny fanjakan’ Andriamanitra)] ; dia hanampy ho anareo izany zavatra izany. » Lioka 12:31
« Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. » Lioka 12:32
« Ary izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin’ny andro farany izy. » Jaona 6:39
« Fa izao no sitrapon’ny Raiko, dia ny hahazoan’izay rehetra mijery ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany. » Jaona 6:40
« Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra » II Kor. 9:7
« … ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. » Romana 12:2b
« Fa izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana » 1Tes. 4:3
« Misaora amin’ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo. » 1Tes. 5:18
« Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny hianareo, fadio ny filan’ny nofo, fa miady amin’ny fanahy ireny; ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin’ny jentilisa, mba hankalazany an’Andriamanitra amin’ny andro famangiana noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny Tompo dia maneke izay rehetra voatendrin’ny olona, na ny mpanjaka, satria ambony izy, na ny mpanapaka, satria nirahiny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon’Andriamanitra, hampanginanareo ny tsi-fahalalan’ny olona adala amin’ny fanaovan-tsoa » 1Pet. 2:11-15
2. INONA NO FIKENDREN’NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Fa Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra hahasoa ny olona niara-belona taminy, dia nodi-mandry ka nangonina ho any amin’ny razany izy ary tratry ny lò » Asa. 13:36
« Izay nanolotra ny tenany (Jesosy) noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin’izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon’Andriamanitra Raintsika. » Galatiana 1:4
3. AHOANA NO AHAFANTARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. » Romana 12:2
4. ANTSOIN’I JESOSY HO IZA ISIKA REHEFA MANAO NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Fa na iza na iza no manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. » Marka 3:35
5. AHOANA NO HANAOVANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« tsy amin’ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin’olona, fa tahaka ny mpanompon’i Kristy manao izay sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo. » Efesiana 6:6
6. INONA NO MANAKANA ANTSIKA TSY HANAO NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Ary izay ao amin’ ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’ Andriamanitra. » Romana 8:8
7. INONA NO TOKONY TANDREMANTSIKA AMIN’NY FANAOVANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ ny Tompo. » Efes. 5:17
« Lozan’ny zaza maditra, izay maka saina, nefa tsy avy amiko, hoy Jehovah, ary manao fanekena, nefa tsy avy amin’ny Fanahiko, mba hanampy ota amin’ny ota » Isaia 30:1
8. INONA NO SOA AZON’IZAY MANAO NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA? INONA NO VOKATR’IZANY EO AMIN’NY FIAINANTSIKA?
« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra. » Matio 7:21
« Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. » Jaona 9:31
« Ary noho izany izahay koa hatramin’ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony hianareo amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin’ny Fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin’ ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin’ ny asa tsara rehetra sady mitombo amin’ ny fahalalana tsara an’ Andriamanitra » Kol. 1:9-10
« Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain’ ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra. » Hebreo 10:36
« Tamin’ ny sitrapony no niterahany antsika tamin’ ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. » Jakoba 1:18
« Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy » I Jao. 5:14
« Ianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery;
Fa Ianao no nahary ny zavatra rehetra,
Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. » Apok. 4:11
9. INONA NO TSY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra, raha ho very na dia iray aza amin’ireny madinika ireny. » Matio 18:14
« Fa tsy sitrako ny fahafatesan’izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebaha hianareo mba ho velona. » Ezekiela 18:32
« Ary « ny oloko marina dia ho velon’ny finoana; » Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko » Hebreo 10:38
10. INONA NO VOKATRY NY TSY FANAOVANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA?
« Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon’ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia hokapohina be. » Lioka 12:47
Anao ny tohiny…
Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho anao mitsidika ity tranonkalan’ny Fiangonana ity.
Nanangona: S. ANDRIANASOLO
@dmin on 25/02/2016 at 14:08
Eto no ahafahantsika manampy.